Kismaayo News » Hala xiro dhagarqabayaasha, maya dhibanayaasha
Hala xiro dhagarqabayaasha, maya dhibanayaasha
Kn: Waxaa maxkamad ay ku bilaabatay 3 qof magaalada Xamar kuwaasi oo ay ka midtahay haweeneey 7 nin oo askar ay kufsadeen, nin wariye ah oo waraystey iyo seeygeeda, halka ay xabsiga ka badbaaday Nuurto Sheekh Maxamuud, madaxweynaha walaashiis oo la sheegey in ay arrintani lug ku lahayd.
Dowladda waxa ay sheegeysaa in dadkani maxkamada saaran ay maleegeen mu’aamarad ay sumcada kaga dilayeen dowladda iyo ciidamada, iyagoo adeegsaday lacag.
Balse hey’adaha xuquuqul insaanka waxa ay farta ku fiiqayaan in dowladda ay waxyeeleyneyso dadkii dhibanayaasha ahaa, halka ay dariiqa iska marayaan kuwa dhagarqabayaasha ahaa.
Haweeneyda sheegatay in la kufsaday oo lagu magacaabo Xaawo ayaa la sheegey in ay war isburinaya sheegtey markii ay xabsiga ku jirtey, balse taasi ay ugu wacneyd kadib markii ay xabsiga kula kulantay hanjabaad iyo cago jugleyn.
Ma jirin baaris caafimaad oo lagu sameeyey gabadha si loo ogaado waxa dhacay.
Cabdicasiis Koronto oo ka tirsan raadiyaha Dalsan ee caasimada ka hawlgala ayaa la sheegey in uu gabadha waraystey, balse uusan faafinin sheekada, police-ka waxa ay ku eedeynayaan in uu lacag siiyey haweeneyda si ay u samayso qirasho been ah.
Ugu horeytii waxaa sheekada faafiyey taleefishinka Al-jazeera, maalmo kadib ayuu wariyaha waraystey gabadha, Aljazeerana waxa ay sheegtey in aysan wax warbixin ah ka qaadanin Cabdicasiis.
Wariyaha, haweeneyda iyo ninkeeda waxaa hadda lagu qaadayaa qodobka 269 ee xeerka ciqaabta Soomaaliyeed oo ka hadlaya ciqaabta uu mudanayo qofka wax u dhima sumcada qaranka .
Intii u dhaxaysay bishii Janaayo ee sanadkii 2012 illaa November, 1700 oo dumar ayaa lagu kufsaday xerooyinka loo barokacay ee gudaha caasimadda, sida ay qabto Zainab Hawa Bangur oo Qaramada Midoobey u qaabilsan xadgudubyada galmada xiliyada dagaalada.